15 emazano akanakisa ekurongedza. -Nhau-Phu Ly Bao Co. Ltd.
15 ezvakanakisa kurongedza matipi nguva dzose.
Maitiro ekurongedza ako kurongedza:
1. Gadzira runyorwa rwekutakura
Pasipoti? Tarisa. Bhurosi remazino? Tarisa. Sunscreen? Doh! Kune rugare rwepfungwa kuti iwe une zvakakosha zvakafukidzwa…
Kurongedza sei mbatya:
2. Dzivisa mavara
Wakamborongedza mbatya dzakareruka uye ukawana banga pavari pawakasvika? Usatombove nedambudziko iri zvakare. Chekutanga iwe unofanirwa kugara uine chokwadi chekuti hembe dzako dzakatsvuka dzakarongedzwa mukati nekunze, uye chechipiri, batisisa kuhotera dzinoraswa shawa makapu wozvishandisa kuvhara pasi peshangu dzako.
3. Rongedza uye rongedza pakiti
Usasvika paunenge uchienda kuzororo uye wotarisana nemurwi we ironing. Kuti uchengetedze nzvimbo uye kumisa kukanda, tenderedza mbatya dzako panzvimbo yekudzipeta, wozoisa mumabhegi ekutsikirira. Kuti ushandise mabhegi aya, isa mbatya dzako mukati, chisimbise bhegi racho, wosvina mweya kunze. Izvi zvinokusiya iwe uine yakawanda yakawanda nzvimbo musutukesi yako uye zvinodzivirira mabhureki.
4. Cube zvipfeko zvako
Imwe yakanaka yekurongedza mhinduro kurongedza cubes - izvi zvinobatsira kupatsanura zvinhu zvako uye kuwana zvinhu nekukurumidza kana uchinge wasvika ipapo.
5. Zadza nzvimbo yakafa
Kana zvasvika pakurongedza, shandisa yega yega masendimita masutukesi nzvimbo yaunokwanisa. Tambanudza misoro, zvipfeko zvemukati, masokisi, uye zvimwe zvinhu zvidiki uye wozvimisikidza mushangu dzako kuti uve nechokwadi chekuti nzvimbo yega yega inogona kuzadzwa.
6. Ramba uri mutsva
Izvo zvakakosha kuti uchengetedze mbatya dzako dzichinhuwirira nyowani, kunyanya kana iwe uri parwendo rurefu. Nekutora bhegi diki remvura, machira ekugadzirisa machira, kana anonhuhwirira edhirowa liners, iwe unozochengeta hembe dzako dzichinhuwirira zvinotapira mukati merwendo.
Maitiro ekurongedza zvigadzirwa.
7. Ziplock mabhegi
Iwe unowanzo rongedza sei ese ako emagetsi, tambo, iwo mafiddly mabhii ayo anotora iwe mazera ekuchera kunze mukuchengeteka? Stuff ivo mukati sevamwe isu? Zvakanaka, kana iwe uchida kuronga kurongedza kwako wozviwanira iwe stash yemaz ziplock mabhegi. Chaja yefoni, charger kamera, maadapter, mahedhifoni - tora mamwe mapurasitiki (iwo mamwe aunoshandisa kutakura zvinwiwa zvemaoko) woashandisa kuchengetera zvinhu zvemagetsi, zvinhu zverwendo rwekuenda kumba (makiyi epamba, tikiti yekupaka, uye kiyi dzemotokari ), mishonga nezvimwe zvakasununguka zvishongedzo. Uye kana iwe uchida gadget, saka iwe unofanirwa kutarisa edu epamusoro ekufambisa accessories.
Maitiro ekurongedza make-up:
8. Mvere dzekotoni
Kuti udzivise poda yako yakatsikirirwa kana mumvuri weziso kubva pakatsemuka panguva dzekufamba kwako, isa padhinda rakapetwa remvere dzemakwai pakati pehupfu hwakatsindirwa uye nevharo
Maitiro ekurongedza mabhuku:
Kunyangwe iri iyo steamy romance inoverengeka, inonakidza sci-fi, kana imbwa-ered yekufambisa gwara, kurodha pasi usati warwendo. Kunyangwe kana pamba iwe uri bepa-til-I-kufa rudzi, chengetedza iyo nzvimbo uye huremu hwehoridhe yako. Uye usatarisira wi-fi kusvetukira kumashure mune iyo nyaya kubva kune yako yakamisikidzwa pamhenderekedzo cheya. Ita shuwa kuti iri pamushonga unodzivirira mvura (tarisa Otterbox kuti uwane dziviriro yakakomba kune yako yaunoda e-kuverenga, foni kana piritsi).
Maitiro ekuchengeta zvakakosha zvakakosha:
10. Bhodhoro risina chinhu nemachubhu
Kuti udzivise mamiriro ezvinhu akaipisisa ekubiwa, zvakanakisa kuve asingazivikanwe: usabhenekesa mari kana zvishongo zvinodhura. Kana iwe uchinetseka nezvezvinhu zvakakosha muhotera yako kamuri, zvivanze mune isina chinhu zuva tan lotion mudziyo. Iwe unogona zvakare kushandisa isina chinhu miromo yebharisamu midziyo yekuvanza yakapetwa manotsi.
Maitiro ekudzivirira ekuwedzera mari yekutakura:
11. Yera mukwende wako
Chengetedza mari mune mamwe masikero emikwende uye ita shuwa kuti unorema mabhegi ako pamakumbo ese erwendo kuti uone kuti wave padyo sei kusvika pahuremu. Kana iwe uri padyo nemuganhu, funga kupfeka zvimwe zvezvinhu zvinorema kana kucheka pane izvo zvaunorongedza pakutanga.
12. Tenga sutukesi isingaremi
Usafunge kuti kutenga sutukesi inodhura kwazvo kunozokutorera kusimudzira - pachinzvimbo, zvinowanzoita kuti vakwezve mbavha kunhandare yendege uye pakufamba kwako. Zvirinani kuve usingaonekwe uye woenda kunoreruka sarudzo. Kana iwe uri kushandisa hardshell sutukesi, izvi zvinogona kuwedzera anosvika mana makirogiramu ehuremu usati watotanga kurongedza, saka anodhura haagari ari nani nguva dzose.
13. Ziva paunogumira
Mari yekutakura inosiyana kubva kunhandare yendege kuenda kunhandare yendege. Ita shuwa kuti iwe unoziva nezvemiganhu yako usati wasvika kuairport. Vamwe, asi havazi vese vanotakura vanokutendera kuti utarise mumabhegi maviri, uye iyo yekuremerwa mvumo inogona kusiyanisa (ona poindi 12). Ita shuwa kuti iwe unonzwisisa iyo ruoko mukwende mvumo uye unodzivirira zvinodhura mari pasuwo. Iwe unogona zvakare kuda kuverenga yedu ruoko mukwende gwaro.
Sei usarase mukwende wako:
14. Svina sutukezi yako
Usatariswe nendege nendege carousel dambudziko kwaunenge uchitsvaga mukwende wako pakati pevakafanana vavakidzani. Nyora sutukesi yako nematagi emitoro uye ugozvipa zvishoma zvekugadzirisa kuti ubatsire kuzviona mukati mevanhu. Shongedza iyo nemaribhoni, zvitambi kana kunyange mavara ane shangu shangu saka zviri nyore kuoneka.
Maitiro ekugadzirisa nemutoro wakarasika:
15. Rongedza mukwende wakanaka
Kunyangwe tikashongedza sei sutukesi yedu, dzimwe nguva izvo zvisingafungidzike zvinoitika. Dzimwe nguva mabhegi anoshaikwa. Ita shuwa kuti zvese zvako zvakakosha zviri mumaoko ako mukwende uye gara uchirongedza imwe shanduko yekuchinja mbatya mune yako ruoko mukwende futi, kungangoitika kana zvakaipisisa zvikaitika uye bhegi rako rakatariswa rikarasika / kunonoka. Nenzira iyoyo haufanire kumhanyira kuzvitoro ukangosvika kuti utenge zvipfeko zvekutsiva. Asi usati waenda uchisundidzira zvese zviri mukwende yako yemumaoko, unogona kushamisika nezvimwe zvezvinhu zvisina kujairika zvisingatenderwe mubhegi rako rembavha.